Marokota: Mudzidzi wekodzero uye kodzero dzevanhu Maati Monjib uyo anotambudzwa nekutonga - TELES RELAY
HOME » pasi rose Marokota: Mudzidzi wekodzero uye kodzero dzevanhu Maati Monjib wekutambudzwa kwekutonga
Marokota: Moroccan mudzidzi uye mudziviriri wekodzero dzevanhu Maati Monjib wekutambudzwa kwekutonga
Zvikoro zvekudzidzira kubva kune gumi nemaviri zvinodzivirira munyori wenhau dzeMoroccan, kupomerwa pamwe nevamwe vanhu vatanhatu "kukanganisa kuchengeteka kwehurumende." Kukanganisa kwake, kuvawo mudziviriri wesununguko rwezvidzidzo uye mhizha.
Purofesa-muongorori weIniversity of African Studies of the University of Mohammed V waRabat, Maati Monjib kubva 2014 "Kafkaesque miedzo" et "Ndiyo nyaya yekusagadzikana kwemakwikwi ekuderedza uye kushungurudza tsika".
Nzira dzinoshorwa nedzimwe dzinopfuura 300 dzidzo kubva kunyika gumi nemaviri pamwe collective forum yakagadzirwa pachena ne16 May 2019. Mutsamba yavo, vanyori vanopa mari yavo kumunyori wenhoroondo yeMoroccan akatevera kubvira ku2014 "Kuderedza kusachengetedzwa kwehurumende", pamwe nevamwe vatanhatu vevatapi venhau nevatsigiri vekodzero dzevanhu.
Makore 57, Maati Monjib anoshanda pamwe chete Orient XXI website iyo yaakanyorera mapepa paHirak, kupandukira muRif kana kuMoroccan vakapikisana. Iyewo mutungamiri wesangano Rusununguko ikozvino nokuda kwerusununguko rwezvinyorwa uye nezvekudzidziswa kwevatapi venhau vaduku kune zvishandiso zvemugari wezvinyorwa.
Vaya vanopomerwa vanotora mutongo kubva kubva kune imwe kusvika kune mashanu mujeri pamwe chete nemari inorema. Asi kubva pakuvhura kwayo munaNovember 2015, kuedzwa uku kwave kwarongedzerwa nguva gumi nemana. Nzeve imwe neimwe inowanzotora maawa mashomanana vasati vadzoka. Izvozvo zvinotevera zvinofanira kuva muna July.
Ikozvino kuitika kwemunyori wenhau dzakaitika kare, iyo yave kutyisidzirwa nayo kubviswa kubva yunivhesiti uye kushanda kwevanhu, inodzoka muna June 2018. Kukokwa kuParis kuti ive chikamu chemajeri eHDR (kubvumidzwa kutsvaga tsvakurudzo) yezvigadziriswa mamiriro ezvinhu Mounia BennaniIye zano regulators, aigadzira runodiwa magwaro kusanganisira mukuru convening of ENS (Ecole Normale Supérieure), pasina mvumo pamutemo administrative chibvumirano, hachishandi dzinoshuma ari Forum.
Maati Monjib uyo ane shure kwake vatatu nzara inouraya, imwe yezuva 24 munaOctober 2015 ye "Tsigira kodzero yako yekutengesa", vachiri kusarudza kubatanidzwa mukuzvidzivirira. Asi paakadzokera kuRabat, akagamuchira "Anokumbira kutsanangurwa" wehutungamiri vesayunivhesiti, apo ushumiri hwake hwekutarisira hwakatanga kumupomera nzira yekuregererwa kwemashure kumusiya "chisarudzo pakati pekuziva kupomerwa zvenhema kana kuparadzwa", Inodaro nyaya.
Kuzivisa yunivhesiti, iyo yakanyorerwa WeDhipatimendi of Mohammed V University, iri gwaro kunyanya (unsurprisingly) ne Mounia Bennani-Chraibi (University wekuLausanne), Pierre Vermeren (University of Paris Pantheon-Sorbonne 1) kana Bernabe Lopez Garcia ( zvionera University of Madrid). "The Institute of African Studies anozvirumbidza website yayo kusimudzira dzakawanda zvedzidzo pamwe uye kufamba vadzidzisi ... In kukwanisa sezvo mapurofesa yunivhesiti nevatsvakurudzi, tinoratidza yedu hanya pamusoro chipingamupinyi ichi dzingaparwe rusununguko"anopedzisa mukuru mukuru.
Maonero ako anokosha.
Tibatsirei kuti tive nekushandura nzvimbo yedu nekupindura mhinduro yedu yemibvunzo.
Ndinopa maonero angu
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/maroc-luniversitaire-et-defenseur-des-droits-de-lhomme-maati-monjib-victime-de-harcelement-judiciaire_3447889.html
Mercato: Benzema inorayira kunze kwekudzokera muL1
Mutungamiri weSouth African Investec Asset Management anova mugove mukuru webhupfumi weWikiGroup